Semalt: Inona no atao hoe rohy fanoratana pejy rohy. 3 Ireo singa miavaka amin'ity Scraper Online ity
Pejy Links Fitaovana fampidiran-drakitra manazava HTML code amin'ny tranokala iray ary mamoaka rohy avy amin'ny tranonkala isan-karazany. Raha vantany vao voatsikera tanteraka ny angon-drakitra, dia mampiseho rohy amin'ny endritsoratra izy io ary mahatonga ny asantsika ho mora kokoa. Ity rantsantanana an-tserasera dia tsy tsara ho an'ny rohy anatiny fa mampiseho rohy ivelany ary manova ny angona ao anaty. Ny fantsona fanodinkodina dia fomba tsotra ahafahana mahita fampiharana, tranokala, ary teknolojia mifototra amin'ny Internet. Ny tanjon'ny Fitaovana fanararaotana Page Links dia ny famenoana ny vaovao avy amin'ny toerana samihafa. Izy io dia miorina miaraka amin'ny fitaovana an-dalam-pitenenana antsoina hoe Lynx ary mifanaraka amin'ny rafitra rehetra miasa. Ny Lynx dia ampiasaina indrindra ho an'ny fanandramana sy fanandramana pejy Internet avy amin'ny baikon'ny baiko. Ireo rohy amin'ny rindrina amin'ny pejy dia fitaovana ampiasaina amin'ny tanana izay novolavola tamin'ny 1992. Mampiasa protocoles amin'ny Internet izy, anisan'izany ny WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, ary HTTPS mba hahazoana ny asa vitanao.
Karazam-bolo lehibe telo amin'ny fitaovana:
1. Datafay manaparitaka amin'ny rindrankajy maromaro:
Amin'ny fampiasana rohy fitaovana fanariana pejy , dia azonao atao ny manaparitaka na mamoaka ny angona amin'ny tavy maromaro. Ireo ordinatera tsotra dia mandray ora vitsivitsy hanatanterahana ny asany, saingy ity fitaovana ity dia mampiasa sehatra maromaro mba hikirakirana pejy 30 pejy amin'ny fotoana iray ary tsy handany fotoana sy hery.
2. Maka data avy amin'ny tranonkala dinamika:
Misy tranonkala miovaova mampiasa teknolojia entina hamoronana fangatahana asynchronous toy ny AJAX. Noho izany dia sarotra ho an'ny ordinatera tsotra mba handraisana ny angona avy amin'ireo toerana ireo. Pejy Rohy Fitaovana maimaim-poana dia manana endri-javatra mahery ary manome fahafahana ny mpampiasa hisintona ny angona avy amin'ny tranonkala fototra sy manan-kery miaraka amin'ny mailaka. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia afaka mamoaka vaovao avy amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy ary manana fepetra hendry mba hisorohana ny fahadisoana 303.
. Fitaovana fampahafantarana ho an'ny format rehetra:
Pejy Rohy Fitaovana matevina manohana ny format isan-karazany sy ny fanafarana tahiry amin'ny endrika MySQL, HTML, XML, Access, CSV, ary JSON. Azonao atao koa ny mandefa kopia sy mametaka ny valiny ao amin'ny Word Document na mampiditra maimaim-poana ireo rakitra entina mankany amin'ny fiara sarotra. Raha manitsy ny sehatra ianao, ny rohy fanasongadinana pejy dia hamintina ny angon-drakitrao ao anaty rakitra matevina amin'ny endrika efa voafaritra. Azonao ampiasaina avy eo io angona io ary afaka manatsara ny toetranao.
Ahoana ny fampiasana an'io fitaovana io?
Mila miditra ao amin'ny URL ianao ary mamela an'ity fitaovana ity hanatanteraka ny asany. Ity dia handinika aloha ny HTML ary hamoaka ny angona ho anao noho ny torolalana sy ny fepetra takiana aminao. Ny vokatra dia matetika hita amin'ny endriky ny lisitra. Rehefa voadika tanteraka ny rohy dia hipoitra eo amin'ny ilany havia ny sehatra. Raha toa ka mandray ny hafatra "No Links Found" ianao dia angamba satria satria tsy mety ny URL nidiranao. Ataovy azo antoka fa niditra tao amin'ny URL tena izy ianao mba handraisany rohy. Raha tsy afaka manaisotra ny rohy amin'ny tanana ianao, dia misy safidy hafa ny mampiasa ny API. Ny API dia ampiasaina amin'ny lamaody ad-hoc ary mandamina fanontaniana an-jatony isan'ora ho an'ireo mpampiasa Source .